National Urban Policy ရေးဆှဲခွငျးကို UN-Habitat တို့ ပူးပေါငျးပွီး ကိုရီးယားနိုငျငံအထောကျအပံ့ဖွငျ့ ဆောငျရှကျမညျ - Myanmar Builders Guide
ဆောကျလုပျရေးဝနျကွီးဌာန၊ မွို့ပွနှငျ့အိမျရာ ဖှံ့ဖွိုးရေး ဦးစီးဌာနနှငျ့ UN-Habitat တို့ ပူးပေါငျးပွီး New Urban Agenda လုပျငနျးစဉျအရ National Urban Policy ရေးဆှဲခွငျးကို National Urban Policy Program (NUPP) အစီအစဉျ (၂၀၁၇-၂၀၂၀) ကို ကိုရီးယားနိုငျငံ၏ အထောကျအပံ့ဖွငျ့ ဆောငျရှကျလကျြရှိပါကွောငျး သိရသညျ။
မွနျမာနိုငျငံ၏ အမြိုးသားမွို့ပွမူဝါဒကိုအစိုးရမှ ဦးဆောငျ၍ ခမြှတျ အကောငျအထညျဖျောသှားနိုငျရနျအတှကျ အမြိုးသားမွို့ပွမူဝါဒရေးဆှဲရေးကျောမတီ (National Urban Committee- NUC ) ကို ပွညျထောငျစုအစိုးရအဖှဲ့၏ အမိနျ့ကွျောငွာစာအမှတျ ၆၂/၂၀၁၉ ဖွငျ့ အဖှဲ့ဝငျ (၂၄) ဦးဖွငျ့ ဖှဲ့စညျးခဲ့ခွငျးဖွဈသညျ။
National Urban Committee ဖှဲ့စညျးရေးအစညျးအဝေးကို ၂၀၁၉ ခုနှဈ၊ ဇှနျလက ကငျြးပခဲ့ပွီးအမြိုးသားမူဝါဒခမြှတျရေးလုပျငနျးစဉျမြားကိုမိတျဆကျပေးခဲ့ပွီးဖွဈသညျ။
National Urban Policy ခမြှတျရေးလုပျငနျးစဉျအရ Consultation Workshop (၃) ကွိမျ နှငျ့ National Urban Policy Forum ကွီးကိုလညျး ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခုနှဈမြားမှာကငျြးပပွုလုပျခဲ့သညျ။
NUC ကျောမတီ အဖှဲ့ဝငျမြားအနနေဲ့လညျးအဆိုပါ Workshop နဲ့ NUP Forum တှမှော ပါဝငျဆှေးနှေးခဲ့ပွီးအဓိကအားဖွငျ့ မွို့ပွမူဝါဒခမြှတျရေးကဏ်ဍ(၈)ခုအပျေါမှာဆှေးနှေးဆောငျရှကျခဲ့ကွောငျး သိရသညျ။
ထိုဆှေးနှေးပှဲမြားမှ ပျေါထှကျလာသညျ့ မွနျမာနိုငျငံ၏ National Urban Policy ကို ၂၀၂၀ ပွညျ့နှဈ၊ ဖဖေျောဝါရီ (၈)ရကျမှ (၁၃) ရကျအထိ UAE နိုငျငံ အဘူဒါဘီ၌ ကငျြးပမညျ့ World UrbanForum – WUF 10 တှငျ ဆှေးနှေးမညျ ဖွဈပွီး OECD. UN-Habitat အဖှဲ့အစညျးမြားနှငျ့လညျး NUP နှငျ့ စပျလဉျြးသညျ့ တှဆေုံ့ဆှေးနှေးပှဲမြား ကငျြးပမညျဖွဈပါကွောငျး ပွညျထောငျစုဝနျကွီး ဦးဟနျဇျောက ပွောကွားသညျ။
ဆောကျလုပျရေးဝနျကွီးဌာန ဒုတိယဝနျကွီး ဒေါကျတာ ကြျောလငျး က အမြိုးသားမွို့ပွမူဝါဒ ညီလာခံမှ ရလဒျမြား၊ National Urban Policy အကောငျအထညျဖျောရာတှငျ ဦးစားပေး နယျပယျ ဧရိယာ (၈) ခု နှငျ့ ရှဆေ့ကျ ဆောငျရှကျမညျ့ လုပျငနျးစဉျမြား နှငျ့ပတျသကျ၍ အစညျးအဝေးပှဲတှငျ ရှငျးလငျးပွောကွားသညျ။
အမြိုးသားမွို့ပွမူဝါဒရေးဆှဲရေး ကျောမတီအစညျးအဝေး (၁/၂၀၂၀) ကို မနကေ့ မှနျးလှဲ ၁ နာရီခှဲတှငျ နပွေညျတျောရှိ ဆောကျလုပျရေးဝနျကွီးဌာန အစညျးအဝေးခနျးမ၌ ကငျြးပခဲ့ကွောငျး သိရသညျ။
မြေကြီးရွေ့လျားစက် လုပ်ငန်းပေါင်း ၄၁ ခုကိုရှာရန်နှိပ်ပါ
National Urban Policy ရေးဆွဲခြင်းကို UN-Habitat တို့ ပူးပေါင်းပြီး ကိုရီးယားနိုင်ငံအထောက်အပံ့ဖြင့် ဆောင်ရွက်မည်
ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအသီးသီးတွင် Habitat III ညီလာခံမှ သဘောတူညီခဲ့သည့် New Urban Agenda လုပ်ငန်းစဉ်အရ National Urban Policy ရေးဆွဲခြင်းကို အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်နေသကဲ့သို့ မြန်မာနိုင်ငံတွင်လည်း အမျိုးသား မြို့ပြ မူဝါဒချမှတ်နိုင်ရေးအတွက် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်းသိရသည်။
ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ မြို့ပြနှင့်အိမ်ရာ ဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစီးဌာနနှင့် UN-Habitat တို့ ပူးပေါင်းပြီး New Urban Agenda လုပ်ငန်းစဉ်အရ National Urban Policy ရေးဆွဲခြင်းကို National Urban Policy Program (NUPP) အစီအစဉ် (၂၀၁၇-၂၀၂၀) ကို ကိုရီးယားနိုင်ငံ၏ အထောက်အပံ့ဖြင့် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါကြောင်း သိရသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ၏ အမျိုးသားမြို့ပြမူဝါဒကိုအစိုးရမှ ဦးဆောင်၍ ချမှတ် အကောင်အထည်ဖော်သွားနိုင်ရန်အတွက် အမျိုးသားမြို့ပြမူဝါဒရေးဆွဲရေးကော်မတီ (National Urban Committee- NUC ) ကို ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့၏ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၆၂/၂၀၁၉ ဖြင့် အဖွဲ့ဝင် (၂၄) ဦးဖြင့် ဖွဲ့စည်းခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
National Urban Committee ဖွဲ့စည်းရေးအစည်းအဝေးကို ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇွန်လက ကျင်းပခဲ့ပြီးအမျိုးသားမူဝါဒချမှတ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်များကိုမိတ်ဆက်ပေးခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။
National Urban Policy ချမှတ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်အရ Consultation Workshop (၃) ကြိမ် နှင့် National Urban Policy Forum ကြီးကိုလည်း ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခုနှစ်များမှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သည်။
NUC ကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်များအနေနဲ့လည်းအဆိုပါ Workshop နဲ့ NUP Forum တွေမှာ ပါဝင်ဆွေးနွေးခဲ့ပြီးအဓိကအားဖြင့် မြို့ပြမူဝါဒချမှတ်ရေးကဏ္ဍ(၈)ခုအပေါ်မှာဆွေးနွေးဆောင်ရွက်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ထိုဆွေးနွေးပွဲများမှ ပေါ်ထွက်လာသည့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ National Urban Policy ကို ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီ (၈)ရက်မှ (၁၃) ရက်အထိ UAE နိုင်ငံ အဘူဒါဘီ၌ ကျင်းပမည့် World UrbanForum – WUF 10 တွင် ဆွေးနွေးမည် ဖြစ်ပြီး OECD. UN-Habitat အဖွဲ့အစည်းများနှင့်လည်း NUP နှင့် စပ်လျဉ်းသည့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲများ ကျင်းပမည်ဖြစ်ပါကြောင်း ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးဟန်ဇော်က ပြောကြားသည်။
ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယဝန်ကြီး ဒေါက်တာ ကျော်လင်း က အမျိုးသားမြို့ပြမူဝါဒ ညီလာခံမှ ရလဒ်များ၊ National Urban Policy အကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် ဦးစားပေး နယ်ပယ် ဧရိယာ (၈) ခု နှင့် ရှေ့ဆက် ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းစဉ်များ နှင့်ပတ်သက်၍ အစည်းအဝေးပွဲတွင် ရှင်းလင်းပြောကြားသည်။
အမျိုးသားမြို့ပြမူဝါဒရေးဆွဲရေး ကော်မတီအစည်းအဝေး (၁/၂၀၂၀) ကို မနေ့က မွန်းလွဲ ၁ နာရီခွဲတွင် နေပြည်တော်ရှိ ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ကျင်းပခဲ့ကြောင်း သိရသည်။